ESTV Maxaa U Diiday Muxaadarooyinka Diinta Islaamka? – Rasaasa News
Jijiga, Apr 11, 2014 – Bogga RasaasaNews, ayaa dhawaanahanba daabacayay Cabashooyin iyo Warbixino ku saabsan Dagaalka Diinta Islaamka uu ku hayo Maamulka degaanka Somalida. Arinkaas oo aan indhaha laga qarsan karin, waxaa ka hadalkeeda ku soo biiray warbaahinta Xogtashacbka oo ka mid ah boggaga degaanka. Hoos ka akhri warbixinta.
Xogta Shacabka (Jigjiga) Tan iyo inti uu hawada soo galay telefishinka Soomaalida Itoobiya ee ESTV, oo qayb wayn ka qaatay dagaalka boro bagaando ee xukuumada Cabdi Iley, waxay dadka Soomaalidu aad ugu barteen dhaantada iyo heesaha lagu taageerayo kacaanka Dib u curashada Kililka 5aad, iyadoo an haba yaraatee laga sii daynin wax muxaadaro iyo wacdi diineed ah.
Baadhintaan ay Xogta Shacabku ku samaysay sababta an ESTV looga baahinin muxaadarooyinka ay muftiyada diinta Islaamku ka soo jeediyaan masaajida waawayn ee magaalada Jigjiga, ayaanu wax ka waydiinay sargaal sare oo ka tirsan Wakaalada Warbaahinta oo naga codsaday inaan magiciisa qarino, ayaa noo sheegay in ay salka ku hayso shuruuc laga soo min guuriyay deegaamada kale ee Ethiopia ee horay u samaystay telefishin iyaga u gaar ah. Deegaamadaasi oo dadkoodu isugu jiro gaalo iyo muslin ayaa go’aansaday inaan saxaafadooda laga baahin wax diin ku saabsan maadaama dadkoodu ay diimo kala duwan yihiin, si uusan khilaaf uga imanin.
Masuuliyiinta Kililka 5aad oon iyagu u fiirsanin ujeedada ka danbaysa xeerkaasi oo dhinaca kale an shacabka Deegaanka Soomaalida ee 100% Muslinka ah khusaynin ayaa ansixiyay inaan wacdi diini ah laga sii daynin saxaafada xukuumadu leedahay. In badan oo ka mid ah Shacabka iyo aqoonyahanka deegaanka Soomaalida ayaa saluugsan in ESTV laga tabiyo un dhaantada iyo heesaha lagu taageerayo xukuumada oo kaliya.
Dhawaan waxaa deegaanka Soomaalida yimid oo mudo bil ka badan ku sugan muftiga caanka ah ee Sheekh Umal kaasoo muxaadarooyin waawayn ku qabtay masaajida magaalada Jigjiga sidoo kalena booqasho ku soo maraya sagaalka gobol ee deegaanka Soomaalida. Nasiib daro ilaa hada ESTV lagama soo daynin wax ku saabsan muxaadarooyinkii Sheekh Umal, halka tartanka dhaantada ee ka socda Qabridahare iyo Goday ay la socdaan gaadiid iyo qalab si toos ah uga soo tabiya caruurta ciyaaraysa.
Qaar kamid ah aqoonyahanka deegaanka oonu aragtidooda ka waydiinay amuurtan ayaa inoo sheegay inay cilladu kajirto dhanka xukuumada kililka oo an rabin inay qaadaan talaabo aysan EPRDF raali ka ahayn, halka ay dadka qaarkii ku kaftamayaan in hada “dhaantada un la inoo fasaxay.”